किसुनजी बारे यस्ता कुराचाहिँ अतिशयोक्ति भयो है ! | सु-सुचित नेपालको चित्र
माओवादीसँग शान्तिवार्ता गरी टुङ्गोमा पु-याउन उहाँकै पालामा शेरबहादुर देउबाको संयोजकत्वमा संस्थागत ढङ्गले वार्ता समिति गठन भएको थियो । त्यसैले अरू केही नभए पनि संवाद र पारस्परिक अस्तित्वको मान्यतामा माओवादीलाई ल्याएको हो । के यी कुरा हामीले बिर्सेकै हौँ ? कि हल्ला र भ्रामक प्रचारवाजीमा रूमल्लिएर हामी हल्लैहल्लाको देशका नागरिकको पहिचान देखाइरहेका हौं ?
किसुनजीलाई महान बनाउन यतिबेला कसै कसैले बीपी र गणेशमानजीका बारेमा अन्टसन्ट बोलेर यस्तो चित्र प्रस्तुत गर्न खोजिँदैछ मानौं बीपी र गणेशमान भनेका कोही होइनन्, जे हुन् किसुनजी मात्र हुन् । किसुनजी बाँचेकै बेला यस्तो मूल्याङ्कन गरेको भए उहाँ कति रिसाउनु हुन्थ्यो होला ! बीपी र गणेशमान जेलबाट कागज गरेर पञ्चायतलाई मान्छौं भनी छुट्नु भएको होइन ।
तत्कालिन कांग्रेस सभापति सुवर्ण शम्शेरले २०२५ सालमा दिएको बक्तब्यलाई समर्थन गरेको त हो, तर त्यसैलाई गाईडलाइन बनाएको होइन । यदि त्यसो भएको भए २०२५ सालमा बीपी र गणेशमानजीहरू छुटेपछि पार्टीले सशस्त्र क्रान्तिको आयोजना कसरी ग-यो त !
हुनपनि किसुनजीले २०१५ सालको चुनाव आफ्नै लापरवाही र किञ्चित ‘छाडा’ ब्यवहारले गर्दा हार्नुभयो । तर हारेका किसुनजीलाई जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको सभामुख बनाउने काममा बीपी कोइरालाको विशेष भूमिका थियो । सभामुखका रूपमा किसुनजीको कार्यसम्पादन, संसदमा निष्पक्षता, बौद्धिकता आदि गुणले पूर्णसफल सभामुखका रूपमा रह्यो । २०१७ सालमा उहाँलाई पनि पक्रेर जेल हाल्दा राजालाई उहाँको प्रश्न थियो, “म सरकारमा बसेको मानिस होइन ।
सबैको साझा सभामुख थिएँ । तर मेरो अपराध के थियो ? के सभामुख हुनु नै अपराध हो ? राजाले यसको जवाफ दिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि अर्को चुनाब नभएसम्म सभामुखको ओहोदा जाँदैन । त्यसैले मलाई बिनासर्त रिहामात्र होइन, अहिलेसम्मको सभामुखको तलब–भत्ता र क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । म कागज गरेर त छुट्दिन, बरू मृत्युपत्रमा सही गरिदिन्छु ।”
यी सबका बाबजुद किसुनजी दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा सबभन्दा त्यागी र इमानदार नेताका रूपमा आउनुहुन्छ । उहाँका कमजोरीजन्य स्वभाव र आनीबानीलाई बिर्सिदिउँ । किनकि उहाँका योगदानका अगाडि ती सबै खोटहरू इतिहासका लागि क्षम्य छन् । उहाँको सबभन्दा ठूलो योगदान भनेको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको मसाललाई देशभित्रै दियोका रूपमा जोगाएर राख्न उहाँले गरेको संघर्ष र योगदानप्रति सबै नतमस्तक हुनैपर्छ ।
वीपी, गणेशमानजी, सुवर्णजीजस्ता मूर्धन्य नेताहरू निर्वासनमा गएर देशभित्र परिवर्तन गर्ने प्रयत्नमा लाग्दा उहाँले देश छोडेर आफू कतै नजाने दृढ अठोट लिनुभयो । स्वच्छ छवि, सादगी, उच्च विचार, आत्म विश्वास र सिद्धान्त र मूल्यको राजनीतिलाई तिलाञ्जली नदिने दृढनिश्चयी राजनेताका रूपमा समकालिन र भावी पुस्ताका साथै इतिहासले उहाँलाई सदैव श्रद्धाका साथ सम्झिरहने छ ।